शोनिका रोकाय जन्म थलो बझाङमा के फलाउदै छिन ? भिडियो सहित हेर्नुहोस्!:: Mero Desh
शोनिका रोकाय जन्म थलो बझाङमा के फलाउदै छिन ? भिडियो सहित हेर्नुहोस्!
Published on: १२ भाद्र २०७८, शनिबार १०:४२
काठमाडौ । सोनिका रोकाय सामाजिक स”ञ्जालमा निकै चर्चित नाम हो । कलाकार, युट्युवर रोकाय अहिले आफ्नो जन्मथलो बझाङमा छन्।जोखिम बढेसंगै मुलुकभर जारी “भएको लकडाउन’का बी च ‘बझाङ गएकी “पनि उतै समय वि”ताउँदै छन् ”। ”काठमाडौंमा रहेर उनलेब’नाएका यु’ट्युव भि’डियो निकै चर्चित हुने ग’रेका थि’ए ।
अ’हिले उनले ब’झाङवाट सामाजिक परि’वेशका भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।”बुवा आमाले ग’रेका खेती किसानीका कामलाई सहयोग गर्दै उनले बिताएका गाउँले जिवन पनि वास्तवमै लोभलाग्दो छ “। ”त्यहाँका मनोरम दृष्य उनले सार्वजनिक गरेका भि”डियोमा देख्न सकिन्छ ।
केही वर्ष अघि उनले नि”र्माण गर्ने युट्युव का’र्यक्रम वाओ नेपालमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग हुने गर्थे भने त्यसमा प्रशासन भएका भिडियो सामग्री पनि सामान्य नागरिकका लागि अस्वभाविक लाग्ने खालका हुने गरेका थिए ।त्यस्तो कार्यक्रम चलाए बापत निकै आलोचना सहदैआएकी सोनि काले आफुले अबशैली परिवर्तन गर्ने बताएकी थिइन्।
यस अघि आफुले बनाएका विषयवस्तु आफैलाईनराम्रो लागेको भन्दै म अब सुध्रिए भन्दै नयाँकार्यक्रम द सोनिका शो सार्व जनि क गरेकी थिइन् ।त्यसमा उनले सामाजिक विषयबस्तुउठाउँदै आएकी छन्” । “केही उनका ब्य’क्तिगत जिवनका भि’डियो पनि सा’र्वजनिक गर्ने गरेकी छन्’ ।” लामो समय दे”खि बझागंमा रहेकी उ”नले त्यहाँ
“आफ्नो ; आमाबुवा र परिवारले गरेको कृषि उत्पादनहरु प्रस्तुत गरेकी छन् ।निकै साधारण भेषभुषामा देखिएकी सोनिका बुवाआमाको यस्तैमेहनतले दिएको प्रतिफलले आफुलाई पनि अभिप्रेरित गरेको बताउँछिन् ।भिडियो हेर्नुहोस्…